Suuqgeynta Mawduuca: Iska ilow waxaad maqashay illaa iyo hadda oo bilow abuuritaanka hoggaamiye adoo raacaya Tilmaamahan | Martech Zone
Ma kugu adag tahay inaad soo saartid raadad? Haddii jawaabtaadu haa tahay, markaa kaligaa ma tihid. Hubspot ayaa sheegay in 63% suuqleyda ayaa leh abuurista taraafikada iyo hoggaanku waa caqabadda ugu sareysa.
Laakiin waxaad u maleyneysaa inaad isweydiineyso:
Sideen ku abuuri karaa jihooyin ganacsigeyga ah?
Hagaag, maanta waxaan ku tusayaa sida loo isticmaalo suuqgeynta waxyaabaha ku jira si loo abuuro tilmaamo meheraddaada ah.
Suuqgeynta waxyaabaha ku jira waa istiraatiijiyad wax ku ool ah oo aad u adeegsan karto abuuritaanka hagida ganacsigaaga. Sida laga soo xigtay Marketo, 93% ee shirkadaha b2b waxay yiraahdaan suuqgeynta suuqgeynta waxay dhalisaa hogaamin ka badan xeeladaha suuqgeynta dhaqameed. Tani waa sababta 85% 0f b2b suuqgeyaal dhah jiilka hogaamintu waa himiladooda ugu muhiimsan ee suuq-geynta suuq-geynta sanadka 2016.
Tilmaamahan, waxaad baran doontaa sida loo abuuro tilmaamaha adoo adeegsanaya suuqgeynta waxyaabaha ku jira. Haddii aad raadineysid inaad soo saarto tilmaamo meheraddaada ah, markaa waad jeclaan doontaa hagahan.
Tallaabada 1: Xullo Dhagaystayaasha Bartilmaameedka Saxda ah
Istaraatiijiyad nuxur wanaagsan leh ayaa ku lug yeelan doonta xulashada dhagaystayaasha saxda ah ee cuni doona waxyaabahaaga. Sidaa darteed, ka hor intaadan bilaabin sameynta waxyaabahaaga, waxaad u baahan tahay inaad ogaato macmiilkaaga ku habboon. Waxaad ubaahantahay inaad lahaato aqoon faahfaahsan oo ku saabsan da'dooda, meesha ay ku sugan yihiin, xaaladdooda dakhli, taariikh nololeedkooda waxbarasho, cinwaanka shaqada, jinsiga, rinjiyadooda rinjiga, iwm.
Qofka wax iibsadaa wuxuu metelayaa danaha macaamiishaada iyo dabeecaddaada markay la macaamilayaan ganacsigaaga. Hal qalab oo aad u adeegsan karto abuurista shaqsiyaddaada iibsadaha waa falanqaynta Google ama Xtensio.
Sida looga helo faahfaahinta macaamiishaada saxda ah Google Analytics
Gal koontadaada Google Analytics oo guji tabka dhagaystayaasha. Tabta dhagaystayaasha waxaa ku hoos qoran tirakoobka dadka (waxay ka kooban tahay da'da iyo jinsiga dhagaystayaashaada), tabka xiisaha, tabta tab, tabta habdhaqanka, teknolojiyadda, moobilka, iwm.
Guji mid kasta oo ka mid ah si aad u muujiso astaamaha dhagaystayaasha. Falanqee xogta aad ka hesho halkaa si aad ugu soo saarto waxyaabo aad u wanaagsan dhagaystayaashaada.
Marka labaad, waxaad ku abuuri kartaa shaqsiyan iibsadahaaga caawimaadda Xtensio. Waa barnaamij kaa caawin doona inaad abuurto shaqsi iibsade qurux badan adoo adeegsanaya arrimo. Haddii aadan haysan faahfaahinta macmiilkaaga, waad isticmaali kartaa kuwan Kooxda La-tashiga Dardar-gelisay su'aalaha infographic.
Jawaabaha su'aalaha kor ku xusan ayaa kaa caawin doona inaad u qaabeyso qof iibsade ku habboon dhagaystayaashaada.
Markaad fahanto cidda dhagaystayaashaadu yihiin, waad u adeegsan kartaa inaad ugu abuurto waxyaabo waxtar u leh iyaga.
Tallaabada 2: Raadi Nooca Tusmada saxda ah
Hadda waxaad haysataa sawirka macmiilkaaga saxda ah, waa waqtigii la heli lahaa nooca ku habboon iyaga. Waxaa jira noocyo kala duwan oo maadooyin ah oo aad u abuuri karto dhagaystayaashaada. Laakiin ujeedada jiilka hogaaminta, waxaad u baahan tahay:
Qoraalka Blog: Abuuritaanka qoraallada baloogyada ayaa muhiim u ah jiilka hoggaaminta. Waxaad ubaahantahay qoraallo tayo sare leh oo wax ku baraya isla markaana dhiirrigelinaya dhagaystayaashaada. Qoraalada Blog waa in si joogto ah loo daabacaa. Sida laga soo xigtay Hubspot, shirkadaha b2b ee boggaga 11 + jeer bishii wax ka badan ka helay 4x hoggaamiyeyaal badan ayaa ka badan kuwa bartaas kaliya 4.5 jeer bishii.
E-Buugaagta: E-buuggu wuu ka dheer yahay kana qoto dheer yahay qoraallada baloogyada. Waxay ku dareysaa qiime dhagaystayaasha aad bartilmaameedsato waana qalab weyn oo loogu talagalay ujeedooyinka jiilka hogaanka. Macaamiishaada mustaqbalka ayaa soo dejisan kara ka dib markay doorteen liiska emailkaaga.
Ka koobnaanta fiidiyaha: Fiidiyowgu wuxuu u baahan yahay waqti badan iyo lacag si loo abuuro. Si kastaba ha noqotee, waxay soo saartaa kaqeybgal marka si hagaagsan loo qabtay. Ku dhowaad 50% dadka isticmaala internetka raadso fiidiyowyo laxiriira badeecad ama adeeg kahor booqashada dukaan.
Infographics: Infographics wuxuu noqonayaa mid caan ka ah sidii hore. Waxay ka kooban tahay xog habeysan oo lagu soo bandhigay qaab muuqaal ah oo soo jiidasho leh. Waad ku dari kartaa qoraaladaada blog-ka sidoo kale waxaad kula wadaagi kartaa shabakadaha warbaahinta bulshada.
Koorso yar: Waxaad ku abuuri kartaa koorsooyin yaryar niche-gaaga si aad wax ugu baraan dhagaystayaashaada inay wax badan ka ogaadaan waxyaabaha aad bixiso. Tani waxay noqon kartaa taxane taxane ah oo isla mowduucyo ah ama fiidiyowyo taxane ah.
Webinars: Shabakadaha internetka ayaa ku wanaagsan ujeedooyinka jiilka hogaanka. Waxay ka caawineysaa dhisitaanka kalsoonida iyo kalsoonida dhagaystayaashaada. Tani waa waxa ay dhagaystayaashaadu u baahan yihiin ka hor intaanay kula ganacsan.
Hadda oo aad ogtahay nooca saxda ah ee kaxeyn doonta taraafikada isla markaana u rogi doonta horseedyo meheraddaada ah, waxa ku xiga ee la sameeyo ayaa ah in la raadiyo kanaal habboon oo lagu dhiirrigeliyo waxyaabaha ku jira.
Talaabada 3: Xullee Kanaalka Saxan oo Faafi Mawduucaaga
Waxaa jira noocyo kala duwan oo kanaal ah oo aad u isticmaali karto inaad ku qaybiso waxyaabaha aad ka kooban tahay. Waxay noqon karaan bilaash ama lacag la siin karaa. Kanaalka bilaashka ah bilaash maahan maadaama aad waqtigaaga ku bixinayso. Waxay qaadataa waqti badan in lagu faafiyo waxyaabaha sidoo kale loo arko natiijo la taaban karo. Khadadka bilaashka ah waxaa ka mid ah shabakadaha warbaahinta bulshada (Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, G +, Instagram, iwm), Suuq geynta, Martigelinta martida, iwm.
Warbaahinta bulshada ayaa la caddeeyay inay tahay marin waxtar u leh ganacsiyada. Sida laga soo xigtay Ad Age, macaamiisha ayaa sheegaya in warbaahinta bulshada wuxuu door weyn ka ciyaaraa iibsashada go'aamada sida telefishanka.
Uma baahnid inaad isticmaasho dhammaan kanaallada, kaliya dooro midka ku habboon halka aad ka heli karto dhagaystayaasha bartilmaameedka ah ee aad kor ku qeexday.
Kanaalka lacag bixinta ah, waa inaad lacag ku bixisaa xayeysiinta. Faa'iidooyinka kanaalka labixiyay ee kanaalka bilaashka ah ayaa ah inay ka dhakhso badan tahay inaad natiijooyin hesho isla markaana waqti badbaadiso. Waxa kaliya ee aad ubaahantahay waa inaad bixisid xayeysiiska waxaadna bilaabi doontaa inaad hesho taraafikada u rogi karta hogaaminta. Waxaad ku xayeysiin kartaa baraha bulshada (Twitter, Facebook, Instagram, iwm), Google Ads, Bing, iwm.
Talaabada 4: Diyaari Magnetkaaga Rasaasta ah
Soojiidashada macdanta "lead" waa dalab aan la diidi karin oo aad u diyaarisay macaamiishaada mustaqbalka. Waa kheyraad ay tahay in bartilmaameedyadaada bartilmaameedka ay xalliyaan dhibaatooyinkooda. Tan macnaheedu waa inay ahaato mid qiimo leh, faa'iido leh, oo tayo sare leh una fududahay inay dheefshiido.
Magnet-kaaga macdanta ah wuxuu noqon karaa buug elektaroonig ah, warqad cad, demo, iwm. Ujeeddada magnetka macdanta `` magnet '' waa inay ka caawiso dhagaystayaashaada inay wax kaa bartaan. Markay inbadan kaa ogaadaan adiga, ayay inbadan ku kalsoonaan doonaan magacaaga.
Waxaad ubaahantahay bog soo degid wanaagsan oo soo jiidan doona dhagaystayaashaada inay isdiiwaan galiyaan. Bog wanaagsan oo degitaanku waa inuu kaa caawiyaa inaad qabsato emaylka martidaada.
Tusaale ahaan, kani waa midka ugu badan ee la soo dejiyo LeadsBridge birlabta macdanta.
Hal dariiqo oo lagu kordhiyo natiijadaada waa in lagu daro barnaamijka softiweerka boggaaga CRM ama softiweerka emaylka, sida MailChimp, Aweber, iwm. .
Tallaabada 5: Qor Qoraallo Blog Tayo Leh
Ha iloobin waxyaabaha ku jira suuqgeynta waxyaabaha ku jira. Jiilka hogaaminaya ee suuq geynta waxyaabaha ku jira wuxuu u shaqeeyaa maadada darteed. Waxaad ubaahantahay qoraallo aad uqurux badan oo tayo leh si aad uguqanciso dhagaystayaashaada inay noqdaan hogaamiyeyaal.
Boostada wanaagsan ee barta waa inay ku jirtaa cinwaan la riixi karo oo dhagaystayaashaada ku soo jiidan kara inay gujiyaan oo ay akhriyaan. Daraasad cilmi baaris ah oo lagu sameeyay Copyblogger ayaa shaaca ka qaaday 8kii qofba 10 ayaa aqrin doona nuqul cinwaan ah, laakiin 2kiiba 10 ayaa kaliya aqrin doona inta hartay. Waxaad ubaahantahay cinwaan soo jiidan kara martidaada si ay udhagsadaan una akhriyaan waxyaabaha aad ka koobantahay.
Marka labaad, waagii abuuritaanka 300-500 boostada blog ayaa tagtay. Foomka foomka dheer ayaa la wareegay. Qoraalkaaga balooggu waa inuu ahaadaa mid dheer, qiimo leh oo aqoon leh. Dhagaystayaashaadu waa inay kahelaan qiime. Maaddaama aad qoreyso nuxurka foomka dheer, waxaad ku dari kartaa sawirro, jaantusyo iyo qormooyin si ay ugu fududaato dhagaystayaashaada inay wax akhriyaan.
Waxaad sidoo kale kuxirankartaa boggaga laxiriira ee kuyaala bartaada ama boggaga kale ee kujira qoraaladaada si aad usii xoojiso tayadeeda
Tallaabada 6: Ka qaybgal Dhageystayaashaada
Hal dariiqo oo aad uga ilaalin karto dhagaystayaashaada inay ku soo noqdaan bartaada waa adigoo la falgala. Tani waxay kaa caawin doontaa inaad abuurto bulsho xoog leh oo ku wareegsan bartaada. Marka ay dhagaystayaashaadu akhriyaan balooggaaga oo aad ku barbaariso qoraallo laxiriira, waxay bilaabi doonaan inay uga baxaan faallooyinka qoraaladaada blogga iyo kanaaladaaga warbaahinta bulshada. Hubso inaad ka jawaabto dhammaan faallooyinkooda. Ha moogaanin iyaga. U fududee akhristayaasha inay kula soo xiriiraan adoo ku daraya bogga xiriirka ama cinwaanka iimaylka bartaada.
Tallaabada 7: Dib-u-habeyn dhageystayaashaada oo waxaad abuurtaa hoggaamiyeyaal
Runtu waxay tahay, 95% dadka booqda degelkaaga dib uma soo noqon doonaan. Taasi waxay ka dhigan tahay wax yar oo aan loo helin jiil hoggaamineed ganacsigaaga. Waxaad ku xallin kartaa dhibaatadan adoo adeegsanaya dib-u-dejinta. Dib-u-habeyn ugu sameyn kartaa akhristayaasha balooggaaga si aad ugu soo celiso websaydhkaaga ama aad uga dhaadhiciso inay u beddelaan hoggaamiyeyaasha. Waxaad ku sameyn kartaa tan adoo ku dhejinaya pixel ama nambarka boggaaga. Markuu qof kastaa u yimaado boggaaga si uu u akhriyo waxa ku jira, waxaad si fudud ugu wareejin kartaa iyaga xayeysiis bogagga kale ama kanaalada warbaahinta bulshada.
Tusaale ahaan, haddii qof u yimaado websaydhkaaga si uu u akhriyo waxa aad ka kooban tahay laakiin uusan iska qorin ama uusan iska qorin sedka magnetka ee bilaashka ah, waad kula socon kartaa iyaga oo ka maraya bogga oo dhan. Waxay si joogto ah u arki doonaan astaantaada waxayna xusuusin doontaa iyaga bixintaada. Dib-u-habeynta ayaa waxtar badan leh. Soo booqdayaasha websaydhka ee dib loo qorsheeyay xayeysiiska bandhiga waa boqolkiiba 70 u badan tahay inuu beddelo Tani waa sababta shantiiba hal mid baa hadda waxay leeyihiin miisaaniyad gaar ah oo loogu talagalay dib-u-dejinta.
U adeegsiga suuqgeynta waxyaabaha ku jira jiilka hoggaaminta waa hab wax ku ool ah. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay waa inaad raacdaa hagaha kore.
Miyaad isku dayday inaad u isticmaasho suuqgeynta waxyaabaha ku saabsan jiilka hogaaminta kahor?
Pss… hadaad rabto inaad waxbadan ka ogaato mowduuca jiilka hogaaminaya waxaan hada diyaarinay liis kulul Tilmaamaha 101 si kor loogu qaado natiijooyinka jiilkaaga hogaaminta!
Tags: warbixinta dhagaystayaashab2bsuuq geynta b2bhubkaau doodista sumaddawacyigelinta noocaContent Suuqishaabuurista u doodayaasha calaamadahaiibinwacdinta macaamiishadaacadnimada macaamiishahaynta macaamiishaeBuugaaghawlgelintaAnalytics googlegoogle Analytics ka dhageysiga dhagaystayaashajiilka ledhagaajinta barbaarintarasaastaledbridgeMacluumaadka Suuqgeyntakoorso yarKordhinta Iibkabartilmaameedka dadweynahamurugocontent contentWebinarsxtensio